Inkonzo emva kwentengiso-Shenzhen Manke Technology Co., Ltd.
Imiqathango yokuthengisa emva kweMankeel kunye newaranti
Eli solotya lisebenza kuphela kubahambisi abagunyaziswe ngokusemthethweni yiShenzhen Mankeel Technology Co., Ltd. kunye neemveliso zeMankeel ezithengiswa kwiiplatifti zokuthengisa ze-intanethi eziqhutywa yi-Shenzhen Mankeel Technology Co., Ltd. I-Shenzhen Mankeel Technology Co., Ltd iya kubonelela abasebenzisi abathenge iimveliso zeMankeel ngewaranti yonyaka omnye.Ukuba imveliso iyasilela phantsi kokusetyenziswa okuqhelekileyo ngokwencwadi yomsebenzisi, abathengi banokuyibuyisela kwinkampani yethu kunye nekhadi lewaranti, siya kukubonelela ngenkonzo yokuthengisa emva kwexesha lewaranti.
Kubasebenzisi abathenge iimveliso ze-Mankeel scooter zombane, siya kukubonelela ngenkonzo yewaranti yonyaka omnye.Ngexesha lewaranti, imveliso ayinakusetyenziswa ngokuqhelekileyo ngenxa yeengxaki zomgangatho wemveliso.Kwiintsuku ezisi-7 ukusuka ekuthengeni imveliso, unokufaka isicelo kwinkampani yethu ukuze ubuyiselwe kwaye utshintshe ii-invoyisi kunye namanye amaxwebhu asemthethweni.Emva kokuba ixesha lewaranti liphelile, inkampani iya kuhlawulisa iintlawulo ezinxulumeneyo kwiimveliso ezifuna ukugcinwa kunye nokuhlaziywa.
1. Umzimba oyintloko wefreyimu ye-scooter yombane kunye nepali ephambili iqinisekisiwe unyaka omnye
2. Amanye amacandelo aphambili abandakanya iinjini, iibhetri, izilawuli, kunye nezixhobo.Ixesha lewaranti ziinyanga ezi-6.
3. Amanye amalungu asebenzayo aquka izibane zangaphambili/izibane zasemva, izibane zebrake, izindlu zezixhobo, iifenders, iziqhoboshi zoomatshini, iibhuleki ze-elektroniki, ii-accelerators ze-elektroniki, iintsimbi, namatayara.Ixesha lewaranti ziinyanga ezi-3.
4. Ezinye iindawo zangaphandle ezibandakanya ipeyinti yesakhelo somphezulu, imichilo yokuhlobisa, kunye neepads zeenyawo azifakwanga kwiwaranti.
Kuzo naziphi na iimeko ezilandelayo, ayifakwanga kwiwaranti yamahhala kwaye iya kulungiswa ngentlawulo.
1. Ukungaphumeleli okubangelwa kukusilela komsebenzisi ukusebenzisa, ukugcina nokulungelelanisa ngokungqinelana ne “Instruction Manual”.
2. Umonakalo obangelwe kukuzilungisa, ukuqhaqha, kunye nokulungiswa komsebenzisi, kunye nokusilela okubangelwa kukungahambelani nemigaqo yokusetyenziswa.
3. Ukusilela okubangelwa kukugcinwa okungafanelekanga ngumsebenzisi okanye ngengozi
4. I-invoyisi esebenzayo, ikhadi lewaranti, inombolo yefektri ayihambelani nemodeli okanye itshintshiwe.
5. Umonakalo obangelwa kukukhwela ixesha elide emvuleni kunye nokuntywiliselwa emanzini (eli gatya lenzelwe kuphela iimveliso ze-Mankeel electric scooter)
1. Imigaqo yewaranti isebenza kuphela kwiimveliso ezithengiswa nguShenzhen Mankeel Technology Co., Ltd. Kwiimveliso ezithengiweyo kubathengisi abangagunyaziswanga okanye ezinye iziteshi, inkampani ayithwali uxanduva lwewaranti.
2. Ukuze ukhusele amalungelo akho asemthethweni kunye nomdla, nceda ungalibali ukubuza umthengisi) kunye nezinye iivawutsha ezixhasayo xa kuthengwa imveliso.
I-Shenzhen Manke Technology Co., Ltd. igcine ilungelo lokutolika lokugqibela lamagama angasentla.